MessageLOUD: ကျမ်းစာ & Mail ဖတ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » MessageLOUD: မိန့်ခွန်းမှစာသား: ကျမ်းစာ & E-mail ဖတ်
MessageLOUD: မိန့်ခွန်းမှစာသား: ဖတ်ကျမ်းစာ & E-mail APK ကို
messageLOUD ရဲ့ မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာ အလိုအလျှောက် သင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ (SMS), WhatsApp ကို Skype, Facebook က, ဖတ် အီးမေးလ်က အားလုံးသင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, အီးမေးလ်များနှင့်အခြားအရေးကြီးသောမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူကျယ်လောင်စွာဖတ်ပါရှိခြင်းအားဖြင့် & ရှိသမျှသည်အခြားသောမက်ဆေ့ခ်ျများထွက်အသံကျယ်! အလေ့အကျင့်ကိုလုံခြုံမောင်းနှင်မှု messageLOUD!
1 ။ စာသားမက်ဆေ့ / SMS ကိုအစဉ်အမြဲ, အစဉ်မပြတ်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
2 ။ ကျယ်လောင်စွာအီးမေးလ်နှင့်အခြားမက်ဆေ့ခ်ျကိုအမျိုးအစားများကိုဖတ်သောအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဗားရှင်း, download, ကနေ 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်အခမဲ့အစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောကျက $ 1.99 တစ်လဖြစ်ပါတယ်။
•အော်တို Start ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်လုံခြုံစွာမောင်း!
သင်ဘီး (ဘလူးတုသ်ထောက်လှမ်း) နောက်ကွယ်မှရသည့်အခါ•အဆိုပါလုံခြုံမောင်းနှင်မှု app ကိုစတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
•အလွယ်တကူအကြား toggle messageLOUDသင်၏တေးဂီတနှင့်သင့်အညွှန်း။
text message & EMAIL အသံကျယ်ကျယ်ဖတ်
• စာသားမ / SMS မက်ဆေ့ခ်ျကိုအလိုအလျောက်ကျယ်လောင်စွာဖတ်ပါ။
•မှစာများ WhatsApp ကို, Skype ကို & Facebook က အလိုအလျှောက်အသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ပါနေကြသည်။
•အလိုအလျောက်ထံမှကျယ်လောင်စွာအီးမေးလ်ကိုဖတ်ပါ ဂျီမေးလ်, က MS ချိန်း Yahoo, IMAP နှင့်, Hotmail.
•ကနေကျယ်လောင်စွာဖတ်မက်ဆေ့ခ်ျ တွစ်တာ, ကြေးနန်း, Instagram ကို, Linkedln, Snapchat, WeChat, Viber ကို, Tango, ပျင်းရိ နှင့်အခြားသော။
•ဖတ်သင့်ရဲ့ inbox ရဲ့အီးမေးလ်များကိုကျယ်လောင်စွာ။
• messageLOUD (optional) မြှင့်တင်ရေးအီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုမည်မဟုတ်။
MESSAGES များ & ခေါ်ဆိုမှုများ - အလိုအလျောက်ခေါ်ဆိုမှုများ & AUTO ဖြေဆိုသူဖြေဆို
•စာသားများခြင်း (SMS မက်ဆေ့ခ်ျ), WhatsApp ကို, Skype ကို & FB Messenger ကိုများအတွက်အော်တိုတုံ့ပြန်။ (အပြည့်အဝ Configure လုပ်လို့ရတဲ့။ )
အာရုံ drive ရပ်ရန်
သင့်ရဲ့အညွှန်းသင်လမ်းညွန်ပေးရနျလိုအပျသညျ့အခါ•ကို Message စာဖတ်ခြင်းဆိုင်းငံ့မှု။
•သင့်ဂီတ, အော်ဒီယိုစာအုပ်များ, Podcast တခုကိုနှင့်ပိုပြီးအလင်းရောင်မှိန်ခြင်းအားဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျများဖတ်။
•သင့် screen ကိုပိတ်ထားရင်တောင်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပါ။ (ဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်ဂရိတ်အခါတက်ကြွသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာညအချိန်တွင်မောင်းနှင်။ )
သင် USA တွင်တစ်ဦးမှာ Android Auto ကိုအသုံးပြုသူရောက်နေတယ်ဆိုရင်, messageLOUD သင့်ရဲ့ Android အော်တို app သို့မဟုတ်သဟဇာတမော်တော်ယာဉ်ဒီတော့စာသားမက်ဆေ့အဖြစ်သင်တို့အီးမေးလ်များကို forward ပါလိမ့်မယ်အသံကျယ်သူတို့ကိုဖတ်ကြားနိုင်ပါတယ်။ (သင်က Android Auto ကိုသုံးတဲ့အခါပွင့်လင်းသို့မဟုတ်တက်ကြွ messageLOUD ရှိသည်ဟုဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ )
လုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ကိုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်: အဘယ်သူမျှမထိုအချိန်တွင်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ (သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ Data) များမှာသိုလှောင်ထားသောသို့မဟုတ် messageLOUD ပုဂ္ဂိုလ်များမှလက်လှမ်း။
အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အများအပြား features တွေအလိုအလျောက်နိုင်ဖို့အတွက် messageLOUD အောက်ပါ device ကိုခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည် / access လုပ်ပါတယ်:
အဆက်အသွယ်များ, စာသား, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ, တည်နေရာ, Email, အသိပေးချက်။
ဒီ application သည်ဤမပါဘဲအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး။
(သင်သက်ဆိုင်ရာက Google Text-to-speech (၏ TTS) အင်ဂျင် installed ရှိရမည်။ )
ဘင်္ဂလာ, တုံ, ခကျြ, ဒိန်းမတ်, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ်, Estonian အဘိဓါန်, ဖိလစျ, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, ဂရိ, ဟိန္ဒူ, ဟနျဂရေီ, အငျဒိုနီးရှား, အီတလီ, ဂျပန်, ခမာ, ကိုးရီးယား, အဘိဓါန် Mandarin-, နီပါလီ, ဘှ, ပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ရုရှ, ဆငျဟာ, စလိုဗ, စပိန်, ဆွီဒင်, ထိုင်း, တူရကီ, ယူကရိန်းနှင့်ဗီယက်နမ်။
သင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, အီးမေးလ်များနှင့်အခြားအရေးကြီးသောမက်ဆေ့ခ်ျအပေါငျးတို့သကျယ်လောင်စွာဖတ်ပါရှိခြင်းအားဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်လေ့ကျင့် Start! လုံးဝမျက်စိ-အခမဲ့အတွေ့အကြုံအတွက် messageLOUD ရဲ့မူပိုင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ!
ယခု Download များနှင့်အာရုံပြံ့လှငျ့မောင်းနှင်မှု၏သံသရာကိုအဆုံးသတ်!
အတော်များများက messageLOUD အသုံးပြုသူများကိုစာပို့မှစကားသံကို အသုံးပြု. reply ကိုထည့်သွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးခဲ့တယ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကဤအရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်မရှေးပါပွီ:
1 ။ ဒါဟာအန္တရာယ်မကင်းပါပဲ။ ဤတွင်စာသားကိုမှစကားသံကိုကိုယ်တိုင်စာပို့သကဲ့သို့အန္တရာယ်များကြောင်းပြသရာလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: https://tti.tamu.edu/featured-project/voice-to-text-driver-distraction-study/
2 ။ အမျိုးသားအဝေးပြေးယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (NHTSA) လမ်းညွှန်ချက်အထူးဒီဆန့်ကျင်အကြံပြုသည်။
3 ။ အဆိုပါနည်းပညာကိုဝေး 100% ကနေဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့လမ်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။
အကူအညီများအတွက်အီးမေးလ် support@messageloud.com ။ ကျနော်တို့အလျင်အမြန် reply!
ဗိုလ်မှူးသစ်ကိုဖြန့်ချိ: အခုသင်, skip archive ကိုသို့မဟုတ်စဉ် messageLOUD app ကိုသွားစရာမလိုဘဲ, အထပ်ကနေအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်, ပေးပို့သူမခေါ်နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ကိုအလွန် support@messageloud.com ရန်သင့်တုံ့ပြန်ချက်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမောင်း!
messageLOUD: မိန့်ခွန်းမှစာသား: ကျမ်းစာ & E-mail ဖတ်